ဘယ်လိုအပ်စိုက်ကုထုံးပူးတွဲနာကျင်မှုသက်သာရာကူညီပေးသည်? - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » သဘာဝကကုစား "ဘယ်လိုအပ်စိုက်ကုထုံးပူးတွဲနာကျင်မှုသက်သာရာကူညီပေးသည်?
သငျသညျအပ်စိုက်ကုထုံးပူးတွဲနာကျင်မှုသက်သာရာကူညီပေးသည်ပုံကိုသိသလား? အပ်စိုက်ကုထုံးရိုးရာတရုတ်ဆေးပညာအပေါ်အခြေခံသည်။ ဒါဟာအများအပြားဝေဒနာနှင့်ရောဂါများကိုသက်သာရာရစေဖို့နှစ်ပေါင်းထောင်ပေါင်းများစွာ၏မူလကျင့်သုံးလျက်ရှိသည်။
ကျနော်တို့ကအခြားရွေးချယ်စရာဆေးဝါး၏ဤဌာနခွဲကုထုံးလုပ်ဆောင်ချက်၏ယန္တရားအသိအမှတ်ပြုရန်ပျက်ကွက်သော်လည်း, အပ်စိုက်ကုထုံးသည်လည်းအနောက်နိုင်ငံများတွင်ကျင့်သုံးလျက်ရှိသည်။ သူတို့ရဲ့ဘဝအရည်အသွေးကိုတိုးတက်လာဖို့သူတို့ကိုအသုံးချတဲ့သူလူနာမြောက်မြားစွာရှိပါသည်။
လုပ်ဆောင်ချက်၏အပ်စိုက်ကုထုံးယန္တရားဆက်ဆက်မသိရသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာအများအပြားလေ့လာမှုများဇီဝကမ္မအပြောင်းအလဲများကိုသရုပ်ပြ အရာအထူးသဖြင့်ပူးတွဲနာကျင်မှု၏အမှု၌, ဒီကုထုံး၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်ထွက်သယ်ဆောင်သည့်အပြောင်းအလဲနဲ့အပြီးပေါ်ပေါက်ပါတယ်။
အပ်စိုက်ကုထုံးကွဲပြားခြားနားသောနည်းစနစ်ကို အသုံးပြု. အချို့သောခန္ဓာဗေဒအချက်များလှုံ့ဆော်ကြောင်းဖြစ်စဉ်များအစုတခုအပေါ်အခြေခံသည်။ ဤအရာ, အဘယ်သူ၏ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများခဲ့ကြသည်အကောင်းဆုံးအကောင်းဆုံးလူသိများ-တကြောင်းétudies-ဖြစ်ပါသည် ယင်းသို့ထည့်သွင်းကြောင်းဒဏ်ငွေအပ် အသားအရေ တစ်ဦးအထူးသဖြင့်လမ်းအတွက်။ ဤသည်အချို့သောရောဂါများမှနာကျင်မှုသက်သာဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင်ဖတ်ပါ: အပ်စိုက်ကုထုံး၏5အကျိုးကျေးဇူးများကိုသင်သိခငျြ
70 နှစ်အတွင်းအသက်အမျိုးသမီးတွေပိုမို 35% osteoarthritis ၏အင်တာနေရှင်နယ်ဖောင်ဒေးရှင်း (OAFI) ကသုတေသနပြုသည်နှင့်အညီပူးတွဲနာကျင်မှုထဲကနေခံရ၏။ ရောဂါ၏ဤအမျိုးအစား musculoskeletal system ကိုသာသက်ရောက်သည်။ ဒါဟာအစဒူးအရိုးမိုဘိုင်းများအတွက်တာဝန်ရှိဆစ်, ခြေဆစ်တိုက်ခိုက်, တင်ပါး သို့မဟုတ်လက်ကောက်။ ပူးတွဲနာကျင်မှုကအရမ်းပြင်းထန်ဖြစ်တဲ့အခါ, တကကုလားထိုင်ပေါ်လမ်းလျှောက်သို့မဟုတ်ထိုင်လျက်ကဲ့သို့သောအခြေခံလှုပ်ရှားမှုများလုပ်ဆောင်ရန်ခက်ခဲသည်။
ပူးတွဲနာကျင်မှုများ ပြင်းထန်တဲ့နှင့်တောင့်တင်းသည်။ ဤသည်ဘေးဒဏ်သင့်ဧရိယာ၌ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းရောင်ရမ်းခြင်းကြောင့်အဆစ်များ၏လှုပ်ရှားမှုများကိုကန့်သတ်။ ဒီအန့်အသတ်ကြောင့်ခက်ခဲလှုပ်ရှားမှုများနှင့်နေ့စဉ်တာဝန်များကိုအောင်နေဖြင့်အသက်တာ၏အရည်အသွေးကအဓိကလမ်းအတွက်နှောင့်အယှက်။
အဖု, purplish တာဝန်များကို
Osteoarthritis ပူးတွဲနာကျင်မှုအကြောင်းတရားများမသန်စွမ်း၏အဓိကအမျိုးအစားများတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာအရိုးနုတဖြည်းဖြည်းပျက်စီးသည်အဘယ်မှာရှိတစ်ဦးဟာဆုတ်ယုတ်ကျဆင်းလာနေမကောင်းဖြစ်တယ်, အရှင်ထိတွေ့ပူးတွဲထွက်ခွာ။ အရိုးတို့ကိုကြောင့်ပွတ်တိုက်အားမှအသေအချာပြင်ဆင်ထားတဲ့ဖြစ်လာသည်။ ဒါကပူးတွဲအတွက်ပြင်းထန်သောနာကျင်မှုများနှင့်တောင့်တင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
အသက်, အဝလွန်နှင့်မျိုးရိုးဗီဇအမွေဥစ္စာကို osteoarthritis မှ predispose သောအချက်များဖြစ်ကြသည်။ လူနေမှုပုံစံစတဲ့ထဲမှာတစ်ဦးကပြောင်းလဲမှုကိုတစ်ခါတစ်ရံရောဂါလက္ခဏာတွေတိုးတက်စေရန်ကူညီပေးနိုင်သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, အတော်ကြာလေ့လာမှုများအတွက်အခြားရွေးချယ်စရာကုထုံးအဖြစ်အပ်စိုက်ကုထုံး၏ထိရောက်မှုကိုသရုပ်ပြပါပြီ osteoarthritis ကုသ.
ကျန်းမာရေး Cochrane database ထဲတွင်စုဆောင်းတစ်ဦးကစနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်မှုအပ်စိုက်ကုထုံးအနည်းငယ်နာကျင်မှုလျှော့ချရန်နှင့် osteoarthritis နှင့်အတူလူနာအတွက်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်နိုင်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။
လူနာထို့ကြောင့်2အုပ်စုများသို့ခွဲခြားခဲ့ကြသည်။ တဦးတည်းအုပ်စုတစ်စုအပ်စိုက်ကုထုံးကုသမှုခံယူခြင်းနှင့်ဒုတိယရိုးရှင်းစွာ (ကုသမှုမပါဘဲ) လေ့လာတွေ့ရှိထားသည်။ 8 နှင့် 26 ရက်သတ္တပတ်ပြီးနောက်, အပ်စိုက်ကုထုံးကုသမှုအကြောင်းမဲ့လူနာသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည် နာကျင်မှုကယ်ဆယ်ရေးနှင့်တိုးတက်လာသောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကို အဆိုပါတည်းကကုသမှုမရှိဘူးအုပ်စုတစ်စုနှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်ပါ။
ပူးတွဲနာကျင်မှုလည်းအချို့သောဆေးဝါးများတစ်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအဖြစ်ဖြစ်ပွားနိုင်သည်။ အဆိုပါ aromatase inhibitors ရင်သားကင်ဆာနှင့်အတူဒါမှမဟုတ်ဖွံ့ဖြိုးဆဲ၏မြင့်မားသောစွန့်စားမှုနှင့်အတူသွေးဆုံးပြီးသားအမျိုးသမီး၏ဖြစ်ရပ်အတွက်လူနာကုသရန်အသုံးပြုကြသည်။ ဒီကုသမှုတချို့လူနာတွေကစွန့်ခွာလာပူးတွဲနာကျင်မှုဒါပြင်းထန်သောဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
ကင်ဆာပညာရပ်သုတေသန SWOG (များ၏သိပ္ပံနည်းကျကွန်ယက်ကိုအားဖြင့်တစ်ဦးကမကြာသေးခင်ကလေ့လာမှုအနောက်တောင် Oncolongy Group မှ) အပ်စိုက်ကုထုံးသိသိသာသာပူးတွဲနာကျင်မှုလျှော့ချကြောင်းပြသ အစောပိုင်းအဆင့်ရင်သားကင်ဆာနှင့်အတူသွေးဆုံးပြီးသားလူနာများတွင် aromatase inhibitors နှင့်အတူကုသမှု၌တည်၏။
လူနာလေ့လာမှု 226 အုပ်စုများပါဝင်ခဲ့သူကို3ခှဲဝေခဲ့ကြသည်:
12 ရက်သတ္တပတ်ပြီးနောက်, အပ်စိုက်ကုထုံးကိုလက်ခံရရှိသူကိုလူနာနာကျင်မှုကယ်ဆယ်ရေးစခန်းကဖော်ပြခဲ့သည်။ ဒါဟာအစလပေါင်းများစွာကြာမြင့်ခဲ့သည်။ ဒါကတစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာအပေါ်တိုးတက်မှုလိုအပ်ပါတယ် opiate မူးယစ်ဆေးဝါးများ နှင့်ဆက်စပ်ဆိုးကျိုးများဖက်က။
ဤအရလဒ်များကိုစဉ်းစား, ကျွန်တော်အပ်စိုက်ကုထုံးကောက်ချက်ချ ပူးတွဲနာကျင်မှုသက်သာရာများအတွက်အသုံးဝင်သောသာထွက်လှည့်။ ကျနော်တို့လက်ထက်လုပ်ဆောင်ချက်က၎င်း၏ယန္တရားစူးစမ်းဖို့ပိုလေ့လာမှုများလိုအပ်ပါတယ်။ ဒီအလေ့အကျင့်လည်း fibromyalgia သို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောပါကင်ဆန်အဖြစ် neurodegenerative ရောဂါများကိုကုသရာတွင်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိပါတယ်။
ပူးတွဲနာကျင်မှု: တစ်အံ့သြစရာဆား-based ကုသမှုနှင့်ရေနံ
သငျသညျပူးတွဲနာကျင်မှုခံစားရပါသလား အံ့သြစရာဆား-based ကုသမှုနှင့်အနှိပ်ခံရေနံကြိုးစားပါကသင်သည်အလျင်အမြန်သက်ရောက်မှုကိုသတိပြုမိမည်! Read more »
the post ဘယ်လိုအပ်စိုက်ကုထုံးပူးတွဲနာကျင်မှုသက်သာရာကူညီပေးသည်? ပထမဦးဆုံးအပျေါမှာထငျရှား သင့်ရဲ့ကနျြးမာရေးကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေ.
cholecystitis ဆန့်ကျင်3သဘာဝကကုစား - သင့်ကျန်းမာရေးကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေ
ဒူးနာကျင်မှုဆန့်ကျင်5သဘာဝကနံ့သာမျိုး